युरोप र एशियामा किन फेरि बढिरहेको छ कोरोना संक्रमण, कुन भेरियन्टले मच्चाइरहेको छ उत्पात? – Health Post Nepal
युरोप र एशियामा किन फेरि बढिरहेको छ कोरोना संक्रमण, कुन भेरियन्टले मच्चाइरहेको छ उत्पात?
२०७८ चैत १७ गते १५:३५
काठमाडौं–विश्वमा फेरि एकपटक कोरोना संक्रमण तीव्र हुन थालेको छ। खासगरी युरोपेली मुलुक र एशियाका चीन, भियतनामलगायतमा फैलिइरहेको संक्रमणमा ओमिक्रोन भेरियन्टको उपभेरियन्ट ‘बीए.२’ मुख्य जिम्मेवार मानिएको छ। यसलाई लुकेको अर्थात् ‘स्टील्थ’ नामले पनि चिनिन्छ। यही भेरियन्टका कारण विश्वमा कोरोनाको अर्को लहर आउने अनुमान गर्न थालिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बीए.२ अहिलेसम्मका सबै सिक्वेन्सिङ केसमध्ये ८६ प्रतिशतमा देखिएको छ। यो ओमिक्रोनका अन्य उपभेरियन्ट बीए.१, बीए १.१मध्य पनि तीव्र रुपमा फैलने बताइन्छ। यद्यपि अहिलेसम्मका केस हेर्दा यसबाट गम्भीर रुपमा बिरामी हुने सम्भावना भने छैन।
कोरोनाविरुद्धको खोप यसअघिका भेरियन्टको तुलनामा बीए.२ विरुद्ध कम प्रभावी मानिएको छ। यद्यपि बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा निकायको तथ्यांकअनुसार अस्पतालमा भर्ना हुने र मृत्यु हुने क्रमलाई रोक्न थप बुस्टर डोजहरु भने आवश्यक हुन्छ।
चीन, जर्मनी, बेलायतलगायतका मुलुकहरुमा संक्रमणले रेकर्ड कायम गर्नुमा बीए.२ लाई जिम्मेवार ठानिएको छ। केही युरोपेली मुलुकमा नयाँ संक्रमित थपिने क्रममा भने केही कमी आएको छ।
ओमिक्रोनका अन्य दुई भेरियन्टको तुलनामा यो भाइरसलाई पत्ता लगाउन गार्‍हो भएका कारण यसलाई स्टील्थ भेरियन्ट भनिएको हो। बीए.१ एक लुकेको जीन हो र यसलाई सामान्य पीसीआर परीक्षणको माध्यमबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। बीए.२ र बीए.३ लाई जिनोमिक परीक्षणबाटमात्र पत्ता लगाउन सकिन्छ।
पहिले बीए.१ बाट संक्रमित भएकाहरुलाई बीए.२ भेरियन्टले आक्रमण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको पनि विशेषज्ञहरु बताउँछन्। बेलायत र डेनमार्कका तथ्यांकहरुले पनि अन्य भेरियन्टबाट संक्रमित हुनेहरु ओमिक्रोनबाट पुनः संक्रमित हुनसक्ने देखाएका छन्।
बीए.२ अर्थात् स्टील्थ भेरियन्ट ओमिक्रोनको मूल भेरियन्टभन्दा फरक कसरी छ, के यो मूल भेरियन्टको तुलनामा बढी गम्भीर हुन्छ भन्नेबारेमा पुष्टि गर्न हालसम्म खासै तथ्यांक छैन। यद्यपि डब्लुएचओले यो भेरियन्ट तीव्र रुपमा फैलनसक्ने बताएको छ।
कसरी प्रभाव पार्छ स्टील्थ भेरियन्टले?
डब्लुएचओका अनुसार ओमिक्रोन भेरियन्टले मुख्य रुपमा श्वासप्रणालीको माथिल्लो भागलाई प्रभावित पार्छ। तर डेल्टाजसरी फोक्सोलाई प्रभावित पार्दैन। यहीकारण यो भेरियन्टबाट प्रभावितहरुले श्वासको समस्या, गन्ध र स्वादको कमीजस्ता अनुभव गर्नुपरेन।
तर विश्वमा देखिएका संक्रमण वृद्धिले यो भाइरसले अझै हानी गर्नसक्ने सम्भावना भने देखाएको छ। यो संक्रमणले विशेषगरी कोरोनाको मापदण्ड नअपनाउने, खोपको कमी भएका स्थान र प्रतिरोधी प्रणाली कमजोर भएका मानिसलाई भने प्रभावित पार्ने देखिन्छ।